IPUBG iiHacks eziHacks ze-Android iiHack cheats ats Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack- Gamepron
PUBG Imfono IIMVAVANYO ZE-Android
I-Gamepron ibonelela ngeyona PUBG isoftware hacks kwi-Intanethi, kwaye konke kuya kufuneka uthenge isitshixo semveliso. Ukufikelela kweyona PUBG cheats ilungileyo namhlanje!
Sele uyithengile iPUBG yeSelfowuni ye-Android? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge i-PUBG Mobile Android hacks, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu IPUBG Iselfowuni ye-Android Hacks
I-PUBG Iselfowuni iiHacks, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
TX lomnqweno yimfumba
Thenga IPUBG Iselfowuni ye-Android IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha iPUBG Iselfowuni kwimidlalo eyahlukeneyo eboniswe kwiGamepron
Khetha i-hack ehambelana neemfuno zakho
Ukulinganisa iimfuno zakho yinjongo yethu! Khetha i-hack ebalingana ngokugqibeleleyo kwi-Gamepron
Yenza zonke iintlawulo zakho usebenzisa iindlela zethu zokuqinisekisa eziqinisekisiweyo kunye ne-100%
Nje ukuba uthenge isitshixo semveliso, fumana ukufikelela kuthi PUBG Mobile cheats kwaye ukhuphele!
Kutheni le Gamepron PUBG Iselfowuni hacks?
I-Gamepron izisa umhlaba wokungena kwindawo entsha, njengoko sizama ukuphucula umgangatho womzi mveliso uninzi lwabasebenzisi olunxulunyaniswa nezixhobo zabo. Ngelixa usenokuzibuza ukuba ungayifumana njani inzuzo xa udlala iPUBG Imfono, i-Gamepron inesisombululo osirhalelayo-besisoloko sinika abasebenzisi bethu inqanaba eliphezulu le-PUBG Mobile cheats okoko sasungulwayo. Ngelixa uninzi lwabanikezeli bemikhangeli luza kusilela ukufeza izithembiso zabo, siluhlobo olwahlukileyo apha eGamepron! Ungathembela kuthi ukuba sihambise ngokubhekisele kumgangatho wezixhobo zethu, kunye nenkxaso yabathengi bethu (into edla ngokungananzwa ngelixa uzama ukukopela kwiPUBG Mobile). Ukuba unayo nayiphi na imiba enxulumene ne-PUBG Mobile hacks, iqela lethu lenkxaso yabathengi liya kuyiphatha ngokukhawuleza kangangoko banako!
Iimpawu ezikhoyo kobu buqhetseba sesinye isizathu sokuba ungafanele ucinge ngokuthenga izixhobo zakho kwenye indawo. Ukushiya izinto phezulu kwithuba akunakulunga kwilizwe lokugenca, njengoko umntu esebenzisa i-PUBG Mobile cheats engalunganga uza kuvalwa. Zonke iimpawu zethu zaphuhliswa ukuba zenziwe ngokwezifiso, zinike abasebenzisi amava ongezelelweyo xa kufikwa kwiPUBG Mobile cheats. Asinakulinga ukukuthintela ekusebenziseni inqaku elinye okanye amabini nokuba, ufumana ukufikelela okupheleleyo kwisixhobo wakube uthenge isitshixo semveliso!
Abaphuhlisi abasebenza neGamepron njengamaqabane baya kuba yeyona nto iphambili ukusukela kuba kuphela kwendlela yokugcina umgangatho ophakamileyo wee hacks. Ngokuqinisekileyo uyaqaphela ukuba zininzi iindlela ezinamaxabiso aphantsi xa kufikwa kwiPUBG Mobile cheats, kwaye kukho ezinye iindlela zasimahla kwi-Intanethi- ayizukuphela ezi zixhobo zikunqande, kodwa zinokuba nomxholo ofihlakeleyo ofihliweyo ngaphakathi!
Ukhuseleko ngumcimbi omkhulu kuninzi lwabaphuhlisi bokuqhekeza, njengoko bengakwazi ukubona ukuba bangabakhusela njani abasebenzisi babo. I-Gamepron iphumeze olona khuseleko luqinisekileyo lokulwa ukukopela, isinika amandla okucima umlilo kwisebe lezokhuseleko. Awunyanzelekanga ukuba uhlale ujonga ngaphezulu kwegxalaba lakho kwaye uhlengahlengise useto lwakho lokuqhekeka ngeGamepron, njengoko izixhobo zethu zingafumaneki kwi-100%, kwaye zininzi ezinye izinto ezisetyenzisiweyo ukuqinisekisa ukuba abantu abakuqondi ukuba uyakopa. Abo bajonge kwi-PUBG Mobile cheats banokuphumla ngokulula, kuba ekugqibeleni uyifumene i-oasis!
I-PUBG ye-Android Wall Hack (ESP)
Ulwazi lwePUBG yeSelfowuni yoMdlali we-ESP (igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
I-PUBG Iselfowuni ye-Android Item ESP eneefilitha
IPUBG Iselfowuni yeAroid Aimbot
PUBG Iselfowuni i-Android isilumkiso sesilumkiso
I-PUBG Mobile Android imowudi yokutsiba ephezulu (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo).
I-PUBG Iselfowuni ye-Android ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
I-PUBG yeSelfowuni yokuFezekisa imbuyekezo
Ngokufanelekileyo IPUBG Iselfowuni ye-Android yimfumba Iimbonakalo
IPUBG Iselfowuni ye-Android Player ESP
I-PUBG Mobile Player i-ESP iluncedo xa ufuna ukugcina iithebhu kwiintshaba kunye neqela lakho, njengoko uza kubabona ngalo lonke ixesha.
Ulwazi loMdlali i-ESP luphawu oluza kukwazisa ngolwazi olubalulekileyo olunxulumene nabadlali (njengamagama abo, ukubalwa kwempilo, kunye nemigama).
Sebenzisa into yethu ye-Item ESP (eneefilitha) ikuvumela ukuba uthabathe iPUBG Iselfowuni kwinqanaba elifanelekileyo ngakumbi, ukunqanda ngokulula ukuphangwa okuthathwa njengokungenamsebenzi.
Ii-Aimbot zigcinwe ngokuhlonitshwa ngenxa yesizathu esivakalayo! Nge-PUBG Mobile aimbot yethu, akukho mntu eMhlabeni oza kukubetha xa kudutyulwa.
I-PUBG Mobile Android Bullet track (esebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Landa umkhondo wakho ngexesha lomlo omfutshane kunye naphakathi kumgama ngokusebenzisa i-Bullet Track feature efumaneka kwi-PUBG Mobile Android cheat!
Izilumkiso zotshaba ziyafumaneka xa usebenzisa le nkohliso, oko kuthetha ukuba umyalezo uza kubonisa kwiscreen nanini na elinye iqela lisondele (lisongela).
I-PUBG Mobile Android imowudi yokutsiba super (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Imowudi yokutsiba ephezulu izakususa umonakalo owe ngokupheleleyo, ikuvumela ukuba uwe ngobabalo (kwaye ngaphandle kokukhathazeka ngokufa, kunjalo!).
I-PUBG Iselfowuni ye-Android ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Kuya kufuneka ukhethe ukuba sisixhobo esisebenza njani, njengoko sibonisa ithambo kwaye sijolise ekukhethweni kokukhetha. Khetha apho ufuna i-aimbot uzenzele khona!
I-PUBG Mobile Android i-aimbot iitshekhi ezibonakalayo zokuhlola ezibonakalayo
Iitsheki ezibonakalayo zisetyenziselwa ukugcina isindululo sakho sendalo ngelixa ukopela kuba i-aimbot ayizukujolisa kubadlali abangekho kumbono wakho.
Zisuse ekubuyiseni umva ngokupheleleyo! Yisuse kumdlalo ngokusebenzisa iMbuyekezo yeCompensator yethu, efumaneka kuphela kwi-PUBG Mobile Android ukukopela.
Nangona iihacks ezithile zitshiphu, azikho naziphi na eziza kudibana nenqanaba lomgangatho obanjelwe apha eGamepron. Xa ufuna ukuba ngowona mdlali ubalaseleyo kwi-PUBG Mobile, konke omele ukwenze kukufumana ukufikelela kwezona cheats zibalaseleyo. Zithengele isitshixo semveliso namhlanje kwaye ubone ukuba kutheni abasebenzisi abaninzi beqhubeka nokuthembela kwi-Gamepron yazo zonke iimfuno zabo zokungxamiseka kwePUBG.
IiHacks zaseFortnite ezidumileyo kunye nokukhohlisa
I-Fortnite ESP kunye neWallhack
I-PUBG eyaziwayo ye-Android Hacks kunye nokukhohlisa
Njengoko idumile njengePUBG Imfonomfono sele ikho, akukho cheats zaneleyo ezinokuthenjwa phaya ukuzalisa isidingo. Ngombulelo, i-Gamepron ekugqibeleni ingena kwisenzo-xa ufuna ezona zixhobo zidumileyo zomdlalo uthandwayo, sele uyazi ukuba siyindawo onokuthembela kuyo. Akukho nasinye sezixhobo zethu esixhotyisiweyo sinenzuzo engqondweni, yiyo loo nto ke esenza ukuba cheats zethu zikhetheke kangaka. Awusoze ube namava amabi xa ukhetha ukusebenzisa i-PUBG Mobile Android ye-hack, njengoko sisipolishe isixhobo amaxesha amaninzi ngaphezulu. Ayisiyiyo kuphela, kodwa siyayazi indlela iPUBG hacks ezinokuthandwa ngayo, ngenxa yoko sihlala sihlaziya ukukhutshwa kwethu ukuqinisekisa ukuba ufumana olona hlobo lubalaseleyo.
Sukuchitha imali yakho ngokukhetha ukukhohlisa nabanye ababoneleli, konke abaza kukwenza kukuthatha imali yakho bakuyeke. Beka ukholo lwakho kwiGamepron kwaye iya kuhlawula.
Sebenzisa i-PUBG mobile aimbot izokukunceda uphumelele ngeendlela ezininzi, kodwa kuya kufuneka uthenge isitshixo semveliso ukwenza njalo (njengoko uza kuba nakho ukufikelela kweyona PUBG Mobile cheat ifumaneka kwi-intanethi ngoku!) . IiHacks zinokuza kwiindidi ezahlukeneyo, kakhulu njengayo nayiphi na into ebomini; Yiyo loo nto kubalulekile ukuba uchonge umthengisi onokuthenjwa ngokukhawuleza. I-Gamepron ifake i-PUBG Mobile aimbot kwi-PUBG Mobile Android ye-hack eya kuthi yonke into ikhutshwe ngoku, kwaye ekuphela kwento eya kuphucula kuyo iya kuba luhlaziyo lwethu olulandelayo!
Unokufikelela kwizinto ezininzi, ezinje ngeSangqa se-FOV, ukuJolisa uSmooth, ukuCima uMlilo / iiNjongo, ukuBekwa phambili kwamathambo, nokunye okuninzi! Uya kwenza ngokwezifiso ngokuchanekileyo ukuba i-aimbot izakusebenza njani, ke uyakube udlala amava okuzenzela (ngokuchasene nokuhambahamba useto oluqhelekileyo, olusaza kusebenza!).
IPUBG Iselfowuni ye-Android ESP kunye neWallhack
Ukusetyenziswa kwePUBG Mobile ESP kunye neWallhack kuqhelekile ngesizathu, njengoko ezi zinto ziya kukunika umbono wemephu ongazange ube nayo ngaphambili. Xa unokubona zombini iintshaba kunye neqela lakho kwiindawo eziqinileyo, ngamanye amaxesha kunokuba nzima. Nje ukuba ufunde ukwetyisa ulwazi (njengamagama, umgama, impilo, izixhobo, izixhobo njl njl.) Kwaye ufumane ukuba ngubani oza kuhlasela kuqala, ungasebenzisa iPUBG Mobile Android ESP ukuze uhlale ukhula. Kuhlala kuhlala kukho ichibi labadlali abatsha abakulungeleyo ukugqitywa ngabasebenzisi beGamepron, kwaye iPUBG Mobile aimbot yenza le nkqubo ibe yomgama kube kanye.
Akukho sidingo sokuziqhelanisa okanye ukuchitha iiyure elabhoratri uzama ukuphucula izakhono zakho kuba unokukhuphela i-PUBG Mobile cheats kwaye ufumane iziphumo ezifanayo. Ixesha yimali, ke sukuzikhathaza ngokuchitha naliphi na ixesha uqhelisela kwaye uthenge nje isitshixo semveliso ye-PUBG Mobile hack.
Indawo yonyawo luphawu oluya kukuvumela ukuba ubone imikhondo yeentshaba, unike abasebenzisi ithuba lokuzilanda kunye nokuzikhupha. Oku kulungele xa ufuna ukuhlala kwindawo efanelekileyo, kodwa ungafuni ukulahlekelwa ziintshaba zakho - unokwenza ukuba uMgama ubone ukuba ukufutshane kangakanani ekujoliseni. Oku kunceda ukuthintela nakuphi na ukumangaliswa okuyimfuneko, njengoko uhlala usazi eyona ndawo ixhoba lakho! Indawo yonyawo luphawu olusandula kuphuhliswa ngamaqabane ethu, kwaye siyazingca ngokuza kuthi ekugqibeleni sikunikeze kwi-PUBG Mobile cheats. Ukonakala okuphezulu yenye into ekufuneka uyiqwalasele, njengoko abanye ababoneleli bengayi kukunika olu khetho.
Ukonakaliswa okuphezulu kunokuvulwa ukuze i-aimbot igxile kuphela kwezona ndawo zibalulekileyo zomzimba ekujoliswe kuzo, ikakhulu entloko nasesifubeni. Awunakukhathazeka ngokuza kubadlali abanezakhono!
Ezinye ii-PUBG ze-Android iiHacks kunye nokukhohlisa
Akukho sidingo sokucinga ukuba indawo yokungenisa igcwele "ukubila" kuba nokuba bayakwazi ukudlala ngaphandle i-aimbot (engenakwenzeka), ukonakaliswa okuphezulu kuya kubakhupha. Iimpawu ezongezelelekileyo ezinxulunyaniswa ne-PUBG Mobile hack yakho azifumaneki naphi na, kwaye zinika umnxeba okhethekileyo owenza ukuba izixhobo zethu zihluke ngakumbi kuninzi. I-Snaplines kunye ne-PlayerBoxes ziya kukuvumela ukuba uchonge kwaye ujolise yakho
iintshaba ngokufanelekileyo, ngelixa uLwazi loMdlali i-ESP inokusetyenziselwa ukubona ulwazi ngakumbi kwiithagethi zakho. Bobabini abadlali bodwa kunye nabadlali beqela banokuxhamla kwesi sixhobo, kuba ayinamsebenzi nemeko; uhlala uhlala unenzuzo xa usebenza neGamepron.
Ngelixa abanye abasebenzisi bokuqhekeza besokola ukukhulisa ubudlelwane kunye nomnikezeli wabo wokuqhekeza, sinikezela ngenkonzo emangalisayo yabathengi kunye neempawu ezingafumanekiyo naphina. Kungenxa yoko le nto singumboneleli # 1 wePUBG hacks kwi-Intanethi kuba senza konke esinako ukuphucula amava abathengi bethu.
IPUBG Isoftware eHacks imibuzo
Kutheni le yethu iPUBG Iselfowuni Android Hacks65 amagama
Sebenzisa i-PUBG Mobile Android ye-hack ukuba ufumane ithuba ngalo lonke ixesha, nokuba ungqinelana nabani. Unokudlala iqela labaqeqeshi abaqinisekisiweyo kwaye ayinamsebenzi, njengoko izixhobo zethu zinamandla kakhulu ukubetha! Awusoze uchithe mali xa uthenga i-PUBG Mobile cheats e-Gamepron, kunjalo.
Kutheni iPUBG yethu ye-Android Aimbot
Sebenzisa i-PUBG Mobile aimbot ukufumana okuninzi kumdlalo! Awunyanzelekanga ukuba uthandaze uya kubaphepha bonke abadlali abanezakhono kwigumbi lakho lokungenisa, njengoko siza kuqinisekisa ukuba uphumelela yonke imipu yakho oyenzileyo ngePUBG Mobile Android aimbot. Khetha kwaye ukhethe apho ufuna i-aimbot ijolise khona, njengoko uya kuba nolawulo olupheleleyo kunye ne-PUBG Mobile hack.
Kutheni iPUBG yethu ye-Android ESP
I-ESP imele "Ukuqonda okungakumbi kokuqonda", kwaye kufana nokongeza umbono we-6th kumdlalo wakho wokudlala. Uyakwazi ukubona uluhlu lwabadlali kunye nezinye izinto eziguqukayo ngelixa udlala, zonke ezinokuthi zibonwe kwiindawo eziqinileyo. Unokufumana olona qhwithela lwe-ESP, unike abadlali amandla okubona izixhobo ezixabisekileyo ngeendonga.
Kutheni iPUBG yethu ye-Android Wallhac
Ukusebenzisa i-wallhack kuya kukuvumela ukuba ubone iintshaba zilungiselela ukukulahla ngeendonga nakwezinye iindawo eziqinileyo / ezi-opaque. Imidlalo ye-Battle royale izele ngamaqela azimisele ukudlala esebenzisa i-META (Eyona ndlela isebenzayo yeQhinga elinokwenzeka), kwaye ngamanye amaxesha uyakudinga i-stellar PUBG Mobile wallhack ukuze ubakhuphe. Ungaze uphinde ufe kwindawo yokulalela xa le nto ivuliwe!
Kutheni yethu iPUBG Iselfowuni yeNorecoil
Ukuphinda ubuye yinto eyahlukileyo eya kuthi uninzi lwabadlala iya kuvuma iyacaphukisa, njengoko kufanelekile nje ukuthoba ukuchaneka kwakho. Ngelixa liyinyani, asifuni ukuba abasebenzisi bethu bajongane nayo ngelixa bedlala iPUBG Mobile. Ngombulelo, siphumeze ukhetho lwe-NoRecoil ye-stellar ngaphakathi kwe-PUBG Mobile Android yokukopela. Ayinamsebenzi ukuba umpu mkhulu kangakanani, uya kudubula ngokuthe ngqo kunangaphambili ngeGamepron!
Ungazikhuphela njani ezona zilungileyo zePUBG ze-Android hacks?
Khuphela zonke ezona zinto zibalaseleyo zePUBG Mobile cheats apha kwiGamepron, ekuphela kwenkonzo ezinikele ngokupheleleyo kumsebenzisi. Abanye ababoneleli beenkonzo baya kwenza inkqubo yokukhuphela ibe yindinisa okanye bade bakunyanzele ukuba uzifake ngokwakho-i-Gamepron inenkqubo yokukhuphela / yokufaka, kwaye ikunike ixesha lokuhlala kwaye uphumle. Cinga ngazo zonke ezo mpu melelo!
Kutheni le nto iPUBG yakho yesoftware hacks ibiza kakhulu kunezinye?
I-PUBG Mobile cheats yahluke kakhulu kunezinye ngengqondo yokuba sinikezela ngenani eliqingqiweyo leendawo zokubeka nangaliphi na ixesha. Abasebenzisi bethu abalwa bodwa xa besebenzisa esi sixhobo, kodwa sinenani eliqingqiweyo leendawo ezikhoyo - izixhobo zethu azibhaqwa ngokupheleleyo kwaye azizukuvalwa. Singathi oko kukodwa kulifanele ixabiso!
Sinexesha elimiselweyo eliya kuthi lihambelane neemfuno zalo naluphi na umdlalo, ngaphandle kwenqanaba lakho lesakhono. Nokuba ufuna ukubona ukuba ngaba kungenxa yakho, okanye ungathanda ukufikelela kwixesha elide, ungathenga isitshixo semveliso ngokufanelekileyo. Siyabanika kusuku olu-1, i-1-veki, kunye nokukhethwa kwenyanga e-1, sinika abasebenzisi bethu ubhetyebhetye obupheleleyo xa besebenza neGamepron. Ungaphuthelwa koku kumangalisayo kwe-PUBG Mobile hacks!
Kuhle IPUBG Iselfowuni ye-Android yimfumba Iimbonakalo